Jooji rabitaanka wax dhici doona oo tag si aad u dhacdo. - qarsoodi - Quotes Pedia
Jooji rabitaanka wax dhici doona oo tag si aad u dhacdo. - Qarsoodi
Bini’aadanku waa noocyo aad u han weyn oo dhulka ku nool, sidoo kale waa kuwo aad u caajis badan sidoo kale. Dhamaanteen waxaan rajeyneynaa guul nolosheena, waxaan dhamaanteen jeclaan laheyn inaan ka hortagno wax xun inay ku dhacaan nolosheena, laakiin waxaa jira dad aad u yar oo dhab ahaantii qaadaya tillaabooyin ay ku doonayaan inay rumoobaan.
Waxaan jeclaan lahayn inaan noqono dhaktar weyn ama injineer hufan, heeso miyir-qabe ah, mashiin qayaxan, iwm. Waxaan jeclaan lahayn inaan wareysiyo siinno shirkaddaas weyn; Waxaan jeclaan lahayn inaan la ciyaarno fanaaniintaas; Waxaan rajeyneynaa inaan la ciyaarno koox isboorti gaar ah hal jeer nolosheena. Dhamaanteen waxaan leenahay hamooyin badan.
Si kastaba ha noqotee, ma fahmin hal shay oo yar. Ma fahmin in halkii aan si fudud wax u sugi lahayn oo aan rajeyn lahayn inay wax nagu dhacaan, haddii aan dadaal ugu jirno sidii ay wax u dhici lahaayeen, waxaan dhab ahaantii hal talaabo ugu dhowaannaa riyadeena, hamigeenna.
Had iyo jeer xusuusnow in haddii aad riyo tahay, hadaf, aad leedahay awood aad ku gaarto. Way kuu muuqatay sababta oo ah waxaad diyaar u ahayd oo aad awood u lahayd inaad bilowdo socodka wadada aad ku gaarto riyada. Inta soo hartay, waa inaad adigu kaligaa sameysaa.
Waa inaad ku sii baacsataa. Waa inaad sii wadaa dagaalka. Dunida ayaa kusii nagaan doonta dhibaatooyinka. Si kastaba ha noqotee, wali waa inaad maareysaa si aad u sii wadato. Waxaad la kulmi doontaa waqtiyo adag; Riyadaadu way u dhowdahay inay liqaan; laakiin waa inaad siisaa difaac iyaga. Waa inaad iyaga ku sii noolaataa.
Sababtoo ah, had iyo jeer ogow sheygan oo ah inta aad ku sii jirto hadafkaaga, kaliya waxay kaa caawin doontaa inaad sare u qaaddo xirfadahaaga si aad u gaarto. Sidaa darteed, markasta oo aad wax rabto, qaado dhawr talaabo si aad u gaadho meeshaas. Waxba bilaash kuma yimaadaan; waa inaad sameysaa.
Samee Hada Quotes
Dhiirrigelinta xigashooyinka Shaqada
Kaliya Samee Xigasho
Xigashooyinka dhiiri-galinta ee Shaqada
Weligaa farxaddaada ha gelin qof kale gacmihiisa. - Qarsoodi
Weligaa farxaddaada ha gelin qof kale gacmihiisa. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Ixtiraamka waxaa loogu talagalay kuwa mudan, ee ma aha kuwa codsanaya. - Qarsoodi
Ixtiraamku waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofku ku gaadhi karo noloshiisa. Haddii qof…
Ha ku eedeyn dadka inay ku niyad jabeen. Naftaada u sheeg inaad wax badan ka filaysid iyaga. - Qarsoodi
Cidna ha ku canaanan niyad jabkiisa maadaama khaladkaagu yahay inaad waxyaabo badan laga filayo…
Markuu noloshu albaab xidho. Mar labaad fur. Waa albaab. Taasi waa sida ay u shaqeeyaan. - Qarsoodi
Markuu noloshu albaab xidho. Mar labaad fur. Waa albaab. Taasi waa sida ay u shaqeeyaan. - Laxiriirta aan lagaran…